IATA: Yakasimba Yekutanga Hafu-Yegore Air Cargo Kukura Kubva 2017
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA: Yakasimba Yekutanga Hafu-Yegore Air Cargo Kukura Kubva 2017
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo kuenzanisa pakati pegore ra2021 ne2020 pamhedzisiro yemhedzisiro kwakamonyaniswa neinoshamisa mhedzisiro yeCOVID-19, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, kuenzanisa kwese kunotevera ndeyaJune 2019 iyo yakatevera yakajairika dhizaini dhizaini.
Kudiwa kwepasi rose kwaJune 2021 kwakakwira 9.9% uchienzaniswa naJune 2019.
Vatakuri vekuNorth America vakapa 5.9 muzana poindi kusvika ku9.9% yekukura mwero muna Chikumi.
Mamiriro ezvinhu ehupfumi pamwe neakanaka mashandisirwo emaketeni anoramba achitsigira nhumbi dzemhepo.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakaburitsa dhata yemisika yepasi rose yekutakura zvinhu munaJune inoratidza 9.9% yekuvandudza pane pre-COVID-19 kuita (Chikumi 2019). Izvi zvakasundira yekutanga hafu-gore mweya nhumbi kukura kusvika ku8%, yakasimba kwazvo yekutanga hafu kuita kubva 2017 (apo iyo indasitiri yakatumira 10.2% gore-ne-gore kukura).
Kudiwa kwepasi rose kwaJune 2021, kuyerwa mumutoro ton-kilometres (CTKs), kwakakwira 9.9% zvichienzaniswa naJune 2019.
Kusiyana kwenzvimbo mukuita kwakakosha. Vatakuri vekuNorth America vakapa 5.9 muzana poindi (ppts) kune iyo 9.9% yekukura mwero muna Chikumi. Vatakuri veMiddle East vakapa 2.1 ppts, eEuropean ndege 1.6 ppts, African ndege 0.5 ppts uye Asia-Pacific vatakuri 0.3 ppts. Vatakuri veLatin America havana kutsigira kukura, kuveura 0.5 ppts kubva pane yakazara.
Hwakawanda huwandu, huchiyerwa mumatoro anowanikwa matoni -makiromita (ma ACTKs), yakaramba yakamanikidzwa pa10.8% pazasi pe pre-COVID-19 nhanho (Chikumi 2019) nekuda kwekuenderera mberi kwekumisa ndege dzevatakurwi. Belly kugona kwakadzikira 38.9% munaJune 2019 mazinga, chikamu chakakanganiswa ne29.7% kuwedzera mune yakazvipira mutakura huwandu.
Mamiriro ezvinhu ehupfumi pamwe neakanaka mashandisirwo emaketeni anoramba achitsigira nhumbi dzemhepo:
Iyo yeUS inventory kune yekutengesa reshiyo iri pane yakaderera rekodhi. Izvi zvinoreva kuti mabhizinesi anofanirwa kukurumidza kuzadza masheya avo, uye kazhinji vanoshandisa nhumbi dzemhepo kuita saizvozvo.
Iyo Inotenga Mamaneja Indices (PMIs) - inotungamira zviratidzo zvekutakura nhumbi dzemhepo - inoratidza kuti bhizinesi chivimbo, kugadzira zvigadzirwa uye mitsva yekutumira kunze kwenyika iri kukura nekukurumidza mune hupfumi hwakawanda. Kunetseka kwekuchinja kwakakura kwevatengi kubva kuzvinhu kuenda kusevhisi hakuna kuzadzikiswa.
Iko-kukwikwidza uye kuvimbika kwendege yemhepo inoenderana neiyo yekutakura midziyo kwave nani. Ivhareji yemutengo wemhepo nhumbi inoenderana nekutakura yakadzikira zvakanyanya. Uye kuronga kuvimbika kwevatakuri vegungwa kwakadonha, muna Chivabvu kwaive kwakatenderedza makumi mana muzana zvichienzaniswa ne40-70% pasati padambudziko.
“Nhumbi dzemumhepo dziri kuita bhizimusi nekukasika sezvo hupfumi hwenyika huchienderera mberi nekumuka kubva mudambudziko reCOVID-19. Iine yekutanga-hafu kudiwa 8% pamusoro pematanho ekutanga-dambudziko, nhumbi dzemhepo inzira yekusimudzira kwendege dzakawanda sezvavanorwira nekuvharwa kwemuganho izvo zvinoramba zvichiparadza bhizimusi revatakuriri vekunze. Zvakakosha, mutambo wakasimba wehafu yekutanga unoita kunge uchaenderera mberi, "akadaro Willie Walsh, Iată'' Director General.